Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa waraana Tigraayiin walqabatee yaada murtee (resolution) haaraa raggaase – AMBO TV
Miseensonni Paarlaamaa Awurooppaa yaa’ii Kamisa gaggeessaniin waraana Tigraayiin walqabatee yaada murtee (resolution) dhiyaate sagalee caalmaan raggaasan.
Miseensonni Paarlaamaa EU waraanni atattamaan akka dhaabbatu, danqaan deeggarsa namoomaa dhiyeessuurratti kaahames ka’ee uummata Tigraayiif deeggarsi akka qaqqabu gaafataniiru.
Hanga dhuma ji’a faranjootaa kanaatti dhiyeessii deeggarsa namoomaa wajjin walqabatee jijjiiramni guddaan tokko yoo dhufuu baate, aanga’oota Itoophiyaa, Eertiraafi TPLF irratti qoqqobbiin akka kaahamus yaadni dhiyaateera.
”Hanga dhuma ji’a kanaatti rakkoon dhiyeessii deeggarsa namoomaa jijjiirama gaashaa hin agarsiisu yoo ta’e, Komishinichi miseensota mootummaa Itoophiyaa, miseensota mootummaa Eertiraafi TPLF akkasumas gocha kanaaf kan gaafataman biroo irra qoqqobbii akka kaahu barbaadu.”
Qaamoleen kunniin waraanicha dheeressuufi gaaga’ama namoomaa hammeessuun lammiilee Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaawwaman miidhaniiru yaada jedhu paarlaamaan EU akeekeera.
Miseensonni Paarlamaa kun sirni dhukaasa dhaabuu hordofu Tigraayitti akka hundaa’u gaafatanii, ta’uu baannaan gaaga’amni namoomaa Tigraayiifi naannolee biroo Itoophiyaa keessatti hammaachaa deema jechuun akeekkachiisaniiru.
Yaadni murtee (Resolution) dhiyaate sagalee deeggarsa 618, mormii 4 fi kan callisaa 58’n raggaasifame.
Paarlaamichi qaamoleen biyyaalessaa, naannoleefi aanaalee dhimmichi ilaallatuun ittisa dhiyeessii deeggarsa namoomaa kan nyaata, qorichaa, boba’aa fi kaanii ifa hin ta’iin akka kaasaniifi deeggarsi naannoo Amaaraafi Affaar keessattis uummata bira akka gahu gaafataniiru.
Yaadni murtii dhiyaate qaamoleen waraana kana keessaa qooda qaban hunduu namoota nagaarratti ajjeechaa raawwatan, humnoota TPLF’n dabalatee qaamolee kaaniin daa’imman waraanaaf filachuu dirqiin gudeeduufi haleellaa saalaa akka tooftaatti fayyadamuu akka dhaaban gaafateera.
Biyyootni ollaa gama siyaasaafi waraanaan rakkoo kana keessa galuun hammeessuurraa akka of qusatanis gaafateera.
Mootummaan Itoophiyaa himannaa deeggarsa namoomaa danquu jedhu dabalatee kanneen biroo qaamolee biyyoota Lixaa addatti ammoo kan gama Gamtaa Awurooppaan dhiyaatu, dantaa addaaf gidduuseentummaa hin malleedha jechuun irra deddeebiin akka balaaleffatu ibsaa ture.
Torban darbe Itoophiyaan hooggantoota UN dhiyeessii deeggarsa namoomaa qindeessa biyyaa ari’achuu ishee hordofee biyyootni akka US, UK, Jaramanii murtee Itoophiyaa kan balaaleffatan yeroo ta’u, US qoqqobbii kaahuuf ibsa kennitee turte.
Paarlaamaan Awurooppaa yaa’ii isaanii Kamisaan mootummaan Itoophiyaa nageenya baqattoota Eertiraaf gaafatama qaba jechuun deeggarsa feesisu hunda akka dhiyeessu gaafataniiru.
Gamtaan Awurooppaa rakkoo Kaaba Itoophiyaatti dhalateef furmaatni karaa nagaa soqamuu qaba jedhee akka amanus ibsameera.
Previous PostLuboonni Kaatolikii Firaans 1950 irraa kaasee daa’imman 216,000 irratti miidhaa saalaa qaqqabsiisaniiru
Next PostAbbaa warraa fi haati warraan Ameerikaa iccitii nikuleeraa gurguruun shakkaman himataman